Weeraro Aan Kala Go' Lahayn Oo Maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho Daafaheeda ..
Sabti, Feb 10, 2007
Weerar loo adeegsaday Madaafiic oo ay dadku dhinteen ayaa maanta meelo kala duwan oo magaalada muqdisho ka dhacay , iyadoo goobaha la weeraray ay kamid ahaayeen garoonka weyn ee diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo goobo kale oo ka tirsan caasimada muqdisho ,
Weeraradan ayaa waxaa ku naf waayey inta la og yahay ilaa 6 qofood oo rayid ah oo ku sugnaa xaafadaha ay degan yihiin iyo weliba xeryo qaxooti oo ay degan yihiin dadka soo barakacay .
Sidoo kale Xaruntii hore ee rugta Saraakiisha ee Jaalle Siyaad ayaa waxaa ku dhacay dhowr madfac, ka dib markii sida la sheegay halkaasi ay tageen kooxo hubeysan oo watay gawaarida noocyada dheereeya ee loo yaqaano surfka , iyadoo madaafiicdaasi ay sababtay dhimashada hal canug oo yar , iyo 3 -dhaawac ah oo ay ku jirto cunuga yar hooyadii.
Dhanka kale ilaa iyo dhowr madfac oo hoobiye-yaal ah ayaa la sheegay in lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, iyadoo madaafiicdaasi aan la ogayn khasaaraha dhabta ah ee ay gaysteen .
Maareeyaha garoonka diyaaradaha ee muqdisho Max'ed Axmed Siyaad ayaa saxaafada u sheegay in howlihii garoonka ay caadigoodii yihiin, isagoo intaas ku daray inaysan jirin wax shaqo ah oo hakad galay ,islamarkaana carabka ku adkeeyey inaysan waxba u dhimi karin waxa uu ku tilmaamay tuur-tuurka Macno darada ah, mar lawaydiiyey khasaaraha soo gaaray garoonka ayuu ka gaabsaday su-aashaas inuu ka jawaabo .
Xaalada Caasimada soomaaliya ee muqdisho oo faraha ka baxday ayaa sidoo kale weeraro Hoobiyeyaal ah isla maanta lagu qaaday Suuq xoolaha lagu iibiyo oo ku yaala deegaanka Deyniile, iyadoo wararku sheegayaan in halkaasi ay ku dhinteen 3 -qof oo rayid ah, islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro dad ah oo aan la sheegin.
Weeraradan isdaba jooga ah ayaa sidoo kale lagu qaaday Hotel Kaah oo lala dhacay Baasuukayaal ayaa waxa ay gaysteen dhimashada hal ruux, iyadoo mid kalena ay toogasho ku dileen ciidamada booliska dowlada kmg ah kadib markii ay gaari nooca gaadiidka dadweynaha ah ay istaajiyeen ciidankani uu ka dhegay islamrkaana ay rasaas ay ku fureen ay haleeshay qofkan rayidka ah ee dhintay .
Si kastaba ha ahaatee xaalada muqdisho oo gashay meel amaankeeda aan laysku halayn karin ayaa ku soo beegmaysa xilli habeenkii xalay ahaa Hotel Global oo ku yaala w/magaalada Muqdisho lagu asqeeyey weerar qoryaha baasuukayaasha ahaa islamrkaana aan lasheegin wax khasaare ah oo halkaas ka dhacay.
.Madaxwaynaha DGPL oo kusoo laabtay Boosaaso....
.Ciidamada Itoobiya oo ka soo baxay Kismaanyo iyo Jilib..
.Muqdisho: Urur sheegtey in uu ka dambeeyey Qaraxyada
.Geele oo sheegay in dalkiisa ku soo dhaweynayo Saraakiishii
.Beelaha Sacad iyo Suleymaan oo heshiis uga furmay..
Wararka oo dhan ka akhri halkan.... Feb 10